FAMPAHALALANA SY SARY MOMBA NY FIOMPIANA ALIKA LABRAHEELER - ALIKA
Fampahalalana sy sary momba ny fiompiana alika Labraheeler
Alika mifangaro mifangaro alika mpiompy any Labrador / alika omby aostralianina
'Alika ity i Lyle. Izy dia mifangaro Heeler Lab mena. Teraka tamin'ny Halloween izy ary feno 1 taona sy sasany. Tiany ny miaro ny ankohonany amin'ny famotehana izay biby vonoiny rehetra hitany. Tiany ny milalao amin'ny zanatsika ary mandreraka azy ireo. Tena nanintona azy izahay hatramin'ny fotoana nihaonantsika taminy satria hitanao fa mitafy ny fony lehibe eo anilany izy toy ny iray amin'ireo toerana misy azy. Izy dia mitazona antsika hatrany amin'ny rantsantanantsika ary maniry ny hihaona amin'izay olona hitany foana. '
Ny alika Labraheeler dia tsy alika madio. Lakroa misy eo anelanelan'ny Labrador retriever ary ny Alika omby ostraliana . Ny fomba tsara indrindra hamaritana ny toetran'ny karazany mifangaro dia ny mijery ireo karazana rehetra ao amin'ny hazo fijaliana ary fantaro fa afaka mahazo mitambatra amin'ny iray amin'ireo toetra hita ao amin'ny karazany roa ianao. Tsy ireo alika hybrid mpamorona rehetra ireo no noompiana fa 50% purebred ka hatramin'ny 50% purebred. Tena mahazatra ny mpiompy ny miompy lakroa misy taranaka maro .
'Cannon ity. Izy dia hazo fijaliana Lab / Blue Heeler. Noraisiko izy rehefa dimy volana izy dia 8 volana amin'ity sary ity. Biby marani-tsaina tokoa izy. Tao anatin'ny 1 herinandro nitondrany azy dia efa fantany mipetraha, mipetraha ary mandry . Nandray ihany koa izy fanandramana trano haingana be. Cannon dia be hery sy be fitiavana. Tiany ny mandeha mivezivezy any amin'ny kijana sy milalao amin'ireo alika hafa. Nahavita tsara tamin'ny ankizy tsy hotapahiny izy mitsambikina amin'izy ireo . Holazaiko amin'ny rehetra, alika tena tsara izy ary tsy hatakaloko na inona na inona. '
'Sarin'i Piper alikako ireto. Izy dia laboratoara / Heeler . Ao amin'ny sary etsy ambony dia 8 volana izy, tena be fitiavana, milalao ary be herim-po. Mila entina izy mivoaka an-tongotra farafahakeliny indroa isan'andro , ary manana toerana hitodihodinana. Ity karazana karazan-kazo mifangaro ity dia mila manana kilalao betsaka raha tsy izany mitsako zavatra (quirk ratsy). Tsy avela irery !! Alika mpiambina tena tsara. Manana filan-komana lehibe tokoa. Hanao soa ao amin'ny trano iray, any no ipetrahako, fa tsy maintsy manana fanatanjahan-tena isan'andro. Tena tsara amin'ny ankizy. Mila milaza aho fa mpanenjika vorona na biby kely izy. Tia manenjika kitrotro sy vorona. Piper dia tena mora hampiofana , hendry be izy ary tsy manana olana amin'ny fanarahana baiko. '
Piper ny Blue Heeler / Labraodor Retriever afangaro toy ny alika kely
'Ity i Sadie. Izy dia Blue Heeler / Lab mavo mifangaro. Roa taona eo ho eo izy amin'ity sary ity. Afaka ny ho sariaka be izy nefa afaka mihetsika mahery setra koa. Rehefa misy olona tonga eo am-baravarana dia mivofoka toa adala izy, saingy tsy hanaikitra izy raha tsy misy mamaky trano. Na dia eo aza ny fihorakorohany sy ny fitondrantenany adala dia alika mamy izy. Tsy dia tia lehilahy lahy toa ny lehilahy vavy no tiany. Sadie dia mpanao fanatanjahan-tena tokoa fa tsy mifaninana amin'ny zavatra hafa satria tsy mifanerasera amin'ny alika hafa izy. Tsy afaka mijanona tsy mivily amin'izy ireo izy. Amin'ny farany, mifanaraka amin'ny alika izy ary hiara-milalao amin'izy ireo. Alika mahafinaritra i Sadie! '
poodle sy ny Cocker spaniel mifangaro alika kely
spermaner spaniel shih tzu mampifangaro alika kely amidy
rottweiler mastiff mifangaro alika kely amidy
pitbull fotsy misy tasy volontany